ကလေးတွေ အစာစားတဲ့အခါ ညစ်ပတ်ပေပွခွင့် ပေးသင့်တာ ဘာကြောင့်လဲ? - Chit MayMay
Home Parenting Child Nutrition ကလေးတွေ အစာစားတဲ့အခါ ညစ်ပတ်ပေပွခွင့် ပေးသင့်တာ ဘာကြောင့်လဲ?
ကလေးတွေ အစာစားတဲ့အခါ ညစ်ပတ်ပေပွခွင့် ပေးသင့်တာ ဘာကြောင့်လဲ?
မေမေတို့ရေ… ကလေးတွေကို သူတို့ကိုယ်တိုင်စားစေခြင်းက အစာစားချင်စိတ်ကို ပိုဖြစ်စေပါတယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ကလေးအသက် ခုနစ်လ၊ ရှစ်လလောက်ဆိုလျှင် ကိုယ့်ဘာသာစားတတ်အောင် စတင်သင်ကြားပေးဖို့ သင့်တော်သော အချိန်ရောက်ပါပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကလေးက သူတို့ဘာသာထိုင်နိုင်ပြီးတော့ ပစ္စည်းများကို ဆုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ စတင် လေ့ကျင့်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ဘာသာ စားရင် အစားအသောက်တွေ ညစ်ပတ်ပေပွမှာတော့ သေချာပါတယ်။ မေမေတို့အနေနဲ့ ညစ်ပတ်ပေပွမှာကို ကြိုက်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လေ့လာမှုတွေအရ ဒီညစ်ပတ်ပေပွတာတွေက ကလေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြီးတော့ မေမေတို့ကလေးကို အစာစားရင်းနဲ့ ညစ်ပတ်အောင်ထားသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်းကောင်းတွေကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
၁။ ပေပေကျံကျံစားခြင်းက ကလေးတွေကို အစားအစာ ဇီဇာကြောင်မှု လျော့စေပါတယ်
United Kingdom အခြေစိုက် သုတေသီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က အသက် ၂နှစ် – ၅နှစ်ကလေး ၇၀အုပ်စုနဲ့ စမ်းသပ်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က ပျော့ပြဲနေတဲ့အစားအသောက် ပန်းကန်လုံးထဲမှာ အရုပ်စစ်သားတစ်ရုပ်ကို မြှုပ်ထားကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ကလေးတွေကို တူးဆွပြီး ရှာခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က ကလေးရဲ့ ပုံမှန်အစားအသောက်တွေအကြောင်းကိုလည်း မိဘတွေအား မေးမြန်းစုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။ စမ်းသပ်မှုအတွင်းမှာ လက်ညစ်ပတ်တာကို နှစ်သက်တဲ့ ကလေးတွေဟာ ရင်းနှီးမှုမရှိတဲ့ ဟင်းလျာတွေကို စားသုံးဖို့ တွန့်ဆုတ်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သော food neophobia ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
၂။ ကလေးရဲ့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်ပြီး စကားလုံးတွေကို စောစီးစွာ လေ့လာဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်
လေ့လာမှုတွေအရ ထိုင်ခုံအမြင့်မှာ ထိုင်ပြီး အစားအသောက်တွေနဲ့ ကစားတဲ့ ကလေးတွေဟာ အစားအသောက်အကြောင်း ပိုသင်ယူစေပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက အစားအစာကို ထိခြင်း(သို့) လက်ဖြင့် စူးစမ်းလေ့လာခြင်းက ကလေးတွေကို အချက်အလက်တွေပိုရယူဖို့ ကူညီပေးရာမှာ အရေးပါကြောင်း ကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ ပါဝင်သူလေးတွေက အရာဝတ္တုတွေကို အမည်တွေနဲ့လည်း ယှဉ်နိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။ ဆိုလိုတာက စကားလုံးသင်ယူခြင်း (သို့) ဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးနှင့် ပတ်သတ်လာရင် ဒီအသိပညာကို အသုံးချနိုင်ကြပါတယ်။
၃။ ဒါက အာရုံခံကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကလေးရဲ့ မော်တာကျွမ်းကျင်မှုအတွက်လည်း ကောင်းမွန်ပါတယ်
ဇွန်းခရင်းတွေနဲ့ ဆုပ်ကိုင်နည်းကို သင်ယူနေတဲ့ ကလေးတွေဟာ ညစ်ပတ်ပေပွတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ဒါက သူတို့အတွက် သင်ယူမှုပုံစံတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဝမ်းဗိုက်တွေအပြင် သူတို့ရဲ့ ဦးနှောက်တွေကိုလည်း သတင်းအချက်အလက်သစ်တွေနဲ့ ကျွေးမွေးပါတယ် ။ဥပမာအားဖြင့် အရာဝတ္တုတွေကို လွှတ်လိုက်ခြင်းက ပြုတ်ကျစေတယ်၊ ပစ်ချလိုက်ခြင်းကလွင့်ပြီး ကျသွားစေတယ်၊ ပဲလို အစားအစာမျိုးကို ဖျစ်ညှစ်ခြင်းက ပုံစံနဲ့ ခံစားမှု ပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးရဲ့အဆိုအရ ကလေးငယ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ထိတွေ့မှုမှတဆင့် ကမ္ဘာကြီးကို စူးစမ်းလိုစိတ်ဖြင့် တွန်းအားပေးကြပါတယ်။ အစားအစာနဲ့ ကစားခြင်းက ကျွန်မတို့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အရေးကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော လက်ချောင်းထိပ်တွေ၊ နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ လျှာတွေကို အသုံးပြုပါတယ်။
ပူခြင်း၊ အေးခြင်း၊ စေးကပ်ခြင်း၊ ချောမွေ့ခြင်း၊ မာကျောခြင်း စသဖြင့် အစားအစာရဲ့ မတူညီသော အသွင်အပြင်နဲ့ အပူချိန်တွေကို စူးစမ်းလေ့လာဖို့ မွေးကင်းစကလေးတွေအတွက် ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းပြီး လွှမ်းမိုးမှာကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
၄။ ကလေးတွေက အမှီအခိုကင်းမှုကို မွေးရာပါလိုလားတာကြောင့် အစားအစာကို သူတို့ဘာသာ ရှာဖွေခွင့်ပြုတာက သင့်လျော်ပါတယ်
သုတေသီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ကလေးတွေရဲ့ သင်ယူမှုပုံစံတွေကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ စမ်းသပ်မှုတွေ ဆက်တိုက်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကလေးတွေကို သူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ သင့်လျော်မယ့် စက်တစ်လုံးကို ပေးပြီး အဲဒီစက်က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာ အဖြေရှာခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ကလေးတွေက သိပ္ပံပညာရှင်လေးတွေလိုပါပဲ။ သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်က အချက်အလက်တွေကို လေ့လာပြီး ဘယ်နည်းဗျူဟာက ထိရောက်မယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက် အမျိုးမျိုးသော ယူဆချက်တွေနဲ့ စမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ကလေးတွေကို ပိုတွေးတောဖို့ လှုံဆော်ပေးကြောင်း အဖွဲ့က မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အစားအသောက်တွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် စားစေတာက ဆိုးရွားတဲ့ စိတ်ကူးတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။
သပ်ရပ်အောင် ပြုလုပ်ပေးခြင်းက အလုပ်အများကြီးဖြစ်စေတာကြောင့် ညစ်ပတ်ပေရေမှုကို လျှော့ချနိုင်မယ့် နည်းတစ်ချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
လက်တစ်ချောင်းစာအရွယ်လှီးထားတဲ့ အစားအစာတွေ(finger foods)ကို ကျွေးပါ
ပန်ကိတ် (သို့) သစ်သီးတွေလို သန့်ရှင်းဖို့ မခက်ခဲတဲ့ အစိုင်အခဲ အစားအစာမျိုးကို ကျွေးကြည့်ပါ။
ကြမ်းပြင်ပေါ်ကျရင် အလွယ်တကူ သိမ်းရလွယ်အောင် ဖျာ (သို့) သတင်းစာခင်းထားပါ။
ကလေးနဲ့အတူထိုင်ပြီးစားပေးခြင်းကလည်း ကလေးက လူကြီးတွေကိုအတုခိုးပြီးတော့ သပ်သပ်ရပ်ရပ် စားလာပါလိမ့်မယ်။
Previous articleဆယ်ကျော်သက်တွေကို အုပ်ထိန်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်သူမှ ပြောမပြခဲ့သော အကြောင်းအရာများ
Next articleအမေနဲ့ သမီးအကြား သံယောဇဉ်ပိုမို ခိုင်မြဲစေဖို့ အတူတူလုပ်နိုင်မယ့် ချစ်စရာလုပ်ဆောင်ချက်လေးများ
ကလေးငယ်များအတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အိမ်တွင်းဟင်းချက်ဂိမ်းများ
ကလေးတွေကို ပိုပြီးစိတ်ရှည်တတ်စေရန် သင်ကြားပေးရမယ့် ဂိမ်းနဲ့ လှုပ်ရှားမှုများ
ကလေးတွေမှာ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးဖို့ အကြံပြုချက် (၅)ချက်